လွှတ်တော် နဲ့ အစိုးရဟာ ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲဘို့ လုပ်နေကြသလား။ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
8:17 AM Htut Htut
” ကချင်ဆိုတာ ကျုပ်တို့ရဲ့ ပြည်ထောင်စုဝင်တိုင်းရင်သားတွေဖြစ်တယ်..။ ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တွေဖြစ်တယ်..။ တိုင်းရင်းသားတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာဟာ ပြည်ထောင်စုကို ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်တာကြောင့် ကျုပ်တို့မုံရွာသားတွေက ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးကိုရှေးရှုပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရတာပါ။”
ကိုအောင်ထွန်းဦးသည် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦး မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် သူ၏ ပြောကြားချက်သည် စာရေးသူ၏ အသဲနှလုံးကိုပင် လှုပ်ခါသွားစေသည်။ “တိုင်းရင်းသားတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာဟာ ပြည်ထောင်စုကို ထိုးစစ်ဆင်တာ ဖြစ်တယ်” — တဲ့။ “ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးကိုရှေးရှုပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရတာပါ” — တဲ့။ ကောင်းလိုက်တဲ့ သဘော ထား နဲ့ တွေးခေါ်မှုပါလား ကိုအောင်ထွန်းဦးရယ်။ ယင်းကဲ့သို့ရှင်းလင်းသောသဘောထား နှင့် တွေးခေါ်မှုကို လက်ရှိ လွှတ်တော်ကြီးတွင် တိုင်းပြည်၏ဘဏ္ဍာငွေများ နေ့စဉ်သိန်းပေါင်းထောင်နှင့် ချီ အကုန် အကျခံကာ ထိုင်ဆွေးနွေးနေ ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ အနက် ယနေ့အချိန်အထိ မည်သူတဦးတယောက်ထံကမျှ မကြားသိရပါ။
This entry was posted on January 26, 2013, in ဥပဒေ, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ နိုင်ငံရေးမှာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာမရှိပါဘူး ဟု ဦးဌေးဦးပြော
အစိုးရကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူမျိုး တုန်း သတ်ဖြတ်မှုကြီးအတွင်းအကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသော အပြစ်မဲ့မွတ်စ လင်မ်များ စာရင်း →